Ndeapi Iwo Lactoferrin Supplements Anobatsira Kune Vakuru Uye Vacheche?
Lactoferrin (LF) ipuroteni yemusango iripo mumukaka mamalia uye kuratidza anti-hutachiona hunhu. Kubva payakatanga kupinda mumakumi matanhatu, pakave nezvidzidzo zvakawanda kusimudzira kukosha kwechirwere cheglycoprotein uye basa rayo mukudzivirira.
Kunyangwe vana vadiki vachigona kuwana chinowedzera kubva mukuyamwa vanaamai vavo, inoshambadzirwa-yakagadzirwa lactoferrin poda inowanikwa kune ese mazera.
1. Chii chinonzi Lactoferrin?
Lactoferrin (146897-68-9) imhando yesimbi-inosunga glycoprotein inemhuri inotapurirana. Mapuroteni aya akapfuma mumasoja ekudzivirira chirwere uye aripo muvanhu nemukaka wemombe. Kunze kwezvo, iwo muhombodo wewakawanda wenyaya wekuvanzika senge misodzi, mateti, mumhino, pancreatic muto, uye bile. Muviri unobva waburitsa glycoprotein mukupindurudza inosimudzira.
Usati waita a lactoferrin Tenga, tora tsamba kuburikidza neiyi tsanangudzo kuti uone kana iyo yekuwedzera yakakodzera.
Huwandu hwehupfumi hwe lactoferrin huripo mu colostrum, ndiyo yekutanga inonamira mvura inoburitswa mushure mekubereka. Iyo yakavanzika mumukaka mukati memazuva maviri kana matatu ekutanga mushure mekubereka. Kunyangwe secretion ye colostrum ichisvika padhuze, huwandu hwakakosha hwe lactoferrin huchiri kuwanikwa mukuchinja uye mukaka wakakura.
Saka, iwe unotora sei lactoferrin kubva bovine colostrum?
Ndibvumire kukutora iwe nenzira yakatwasuka yekuparadzanisa lactoferrin.
Nhanho yekutanga inosanganisira kupatsanura Whey kubva mukaka. Whey ndiyo yemvura byproduct inosara mushure mekuda kana kuwira mukaka uine acidic compound. Iyo yekuzviparadzanisa maitiro inoita kushandisa hydrophobic kudyidzana chromatography uye ion-kuchinjana chromatography inoteverwa nekuteedzana kunotevedzana nemhinduro dzemunyu.
Bovine colostrum inobva kumombe. Iyo yakafuma mumapuroteni, maantibhakitiriya, zvicherwa, mavitamini, makabhohaidhiretsi, uye mafuta. Aya ma parameter akasimbisa iyo yekurapa kukosha kwecolostrum, nekudaro, kukwezva kufarira pakati pekutsvagisa masayendisiti munzvimbo yekurapa.
Nekuda kwekuti izvo zvirimo zve lactoferrin zvichiderera sezvo nguva yekubereka ichawedzera, nzvimbo yekutsiva inokurudzirwa kumucheche. Tora, semuenzaniso, yakajairika LF pakarepo mushure mekuzvarwa inenge 7-14mg / ml. zvisinei, iyo kokisheni inogona kudonha kusvika kunenge 1mg / ml nemukaka wakakura.
Kana iwe uchida kuratidzira mune immunological lactoferrin, iwe unofanirwa kubhangi pane bovine colostrum yekuwedzera.
Zvekutengesa-zvakagadzirwa lactoferrin yakawanda upfu chibereko chebovine colostrum. Zvisinei, chigadzirwa chacho chave chiri kunetseka kune vamwe vanhu vanoita sevanoshungurudzwa nekutapukirwa nechirwere chemombe chinopenga. Zvakanaka, regai ndikuvimbisei kuti ichi chiitiko hachiwanzoitika. Kunze kwezvo, mamwe lactoferrin mucheche anowedzera ndeanotora emupunga wakagadzirwa nemajini, mukufarira vanhu vasingashiviriri lactose.
2. Nei uchishandisa Lactoferrin Powder seMarongero, iwo maLactoferrin Rubatsiro ari?
Cutibacterium uye propionibacterium ine mhosva yeakawanda acne. Lactoferrin inoshanda kurasa aya mabhakitiriya esimbi uye kuderedza mhedzisiro yawo.
Mune mamwe mamiriro, mahara radicals uye anoshanda zvakare oksijeni marudzi anobatsira mukukuvara kwemaseru uye kukuvara kweDNA. Nekuda kwekunetseka kwe oxidative, kuzvimba kunogona kuitika uye kukanganisa kukura kwe acne. Maererano nesainzi yekutsvagisa, lactoferrin inorwisa-oxidant, nekudaro, iko kugona kurwisa emahara radicals.
Kutora lactoferrin padivi pevhitamini E uye zinc kunoderedza acne maronda uye comedones mune angangoita mwedzi mitatu.
Kunze kwezvo, kuzvimba kunokonzeresa kuumbwa kweacne uye cysts nekuvhara iyo mapores. Izvo zvinopesana nekuzvidzivirira kwezve lactoferrin inovimbisa kukurumidza kuporesa kwemaronda.
Dermatologists vanosimbisa pane iyo kuti hutano hwako hwehutachiona chiratidzo cheganda rako. Semuenzaniso, kana gumbo rako remberi richitsemuka kana risina hutano, kushandisa marudzi ese emafuta kumeso kana epasi-mamiriro epasi haagadzirise kuzvimba kweganda, mitambo, kana eczema. Kutora lactoferrin kuchaburitsa hutachiona utachiona husina tsvina mudhirowa nzira ichikurudzira basa reBifidus flora.
Kunze kwekurapa mhezi, lactoferrin yakadzoreredza zviratidzo zve psoriasis uye yakawedzera kukurumidza kupora kubva kumaronda emutsipa wetsono, ayo akapararira pakati pevarwere vane chirwere cheshuga.
Zviverengero zvidzidzo zvinotsigira kuti Lactoferrin (LN) inodzivirira hutachiona, mabhakitiriya, utachiona, uye hutachiona hutachiona kubva pakurwisa muviri. iyo komponi inoshanda nekusunga kune aya ma microbes, kukanganisa kwavo maseru maseru, uye kuvhara maseru receptors.
Mune imwe fundo, vesaenzi vakacherekedza izvozvo lactotransferrin (LTF) yaive yakanyanya kushanda pakudzivirira herpes hutachiona kupfuura shanduro yevanhu. In vitro zvidzidzo zvakare zvinoratidza kuti iyi yekuwedzera inoshanda nemazvo mhedzisiro yehutachiona.
Mune madosi mashoma, lactoferrin inoshanda kugadzirisa huturu hweHepatitis C. Maererano na Hepatology Tsvagiridzo, uku kurapa kunowedzera kutaura kweiyo interleukin-18, puroteni inotungamira nekudzosa hutachiona hweHepatitis C. Kuti uwedzere kushanda zvakanaka, varwere vanofanirwa kutora anenge 1.8 kusvika 3.6 magiramu ehuputi pazuva. Icho chikonzero ndechekuti yakadzika dosi ye lactoferrin haizoiti mutsauko mune yehutachiona.
Iko kune fungidziro, iyo inofunga LF sekurapa kwehelicobacter pylori hutachiona. Kana iwe ukaisa iwo wekuwedzera pamwe neako chaiwo maronda ekurapa, mikana ndeyekuti mishonga ichave inoshanda. Uku kutaura kwave kuri kukakavara kwepfupa pakati pevaongorori sezvo ruzhinji ruchibata kuti lactoferrin poda inoshandisa ichave isingashande mukushaikwa kwemishonga yekunyorera
Kutongwa kweIron Metabolism
Lactoferrin haingori chete kudzora kusunganidzwa kwesimbi mumuviri asi zvakare kuwedzera kuwedzera kwayo.
Pave paine kuenderera mberi kwekiriniki kuongororwa uko kwakatsvaga kuenzanisa nekubudirira kweLF kurwisa ferrous sulfate mu iron kushaya anemia panguva yekuzvitakura. Eya, kubva mukuedzwa, lactoferrin yakaratidza kuve yakasimba mune kukurudzira kuumbwa kwehemoglobin nemasero matsvuku eropa.
Vakadzi vanodya iyo glycoprotein vane yakakwana simbi nhanho ine zero mhedzisiro. Lactoferrin inoshanda kudzikisira mukana wekupererwa nemimba, preterm kuberekwa, uye pasi kuberekwa uremu.
Naizvozvo, zviri pachena kuti chinhu chakanakira amai vanepamuviri uye vakadzi vezera rekubereka mwana vanorasikirwa nemamwe ma irons kana vari mumaments avo. Vegetarians uye vanowanzo kupa vanopa vangabatsirwawo ne lactoferrin supplements.
Hutano hweGastrointestinal Turakiti
Lactoferrin mwana anowedzera anodzora uye anochengetedza ura hutano. Inobvisa mabhakitiriya anokuvadza, ayo anokonzera kuzvimba. Semuenzaniso, aya ma microbes anoverengera ruzhinji rwegastroenteritis kesi uye enterocolitis, iyo inokuvadza matumbo emadziro anotungamira kurufu rusati rwasvika. Kana nekuda kwechimwe chikonzero, mwana wako asiri kuyamwa, zvinokurudzirwa kuti iwe uchinjise kune bovine lactotransferrin (LTF).
3. Lactoferrin Inobatsira pane Mucheche
Lactoferrin mwana anowedzera anotadzisa kukura kwehutachiona mumatumbo evacheche vacheche. Aya ma microbes anosanganisira Escherichia coli, Bacillus stearothermophilus, Staphylococcus Albus, Candida albicans, uye Pseudomonas aeruginosa. Zvidzidzo zvakati wandei zvinotsigira chokwadi chekuti kudya kwezuva nezuva kwe lactoferrin yakawanda yekuwedzera kunoderedza mikana yeiyo noroviral gastroenteritis muvacheche.
Ndichiri mudumbu, LF inosimudzira kuwanda kwemasero endothelial apa ichitaura kukura kweelmphatic follicles. Naizvozvo, zvinova pachena kuti lactoferrin supplementation inogona kunge iri mishonga yekukuvara kwamatumbo mucous.
Kuyamwisa ndiko kunonyanya kupa simbi neonates. Nekudaro, vana chiremba vezera vanokurudzira kuti kuwedzerazve kuwedzera kwesimbi kuri madikanwa sezvo mukaka wamazamu uine mashoma emari iyi.
Nditendere nditsanangure kuti sei LF iri yekuwedzera inowedzera kune preterm vacheche uye vacheche vanozvarwa vaine yakaderera birthweight. Kazhinji, iri boka rinotapurwa zvakanyanya ne-iron-kushomeka kweanemia. Kugovera iyo lactoferrin yemwana yekuwedzera inowedzera hemoglobin uye matsvuku masero eropa mune yemwana mudiki system. Zvakare, zvidzidzo zvinoratidza kuti iron yekuwedzera inowedzera kukura kwetsinga kwemucheche.
Dzimwe nguva, mabhakitiriya anokuvadza senge E.coli anodyira pane iripo simbi pane neonatal ematumbo ematumbo. Kutora lactoferrin kuchanyima hutachiona hwevhu uye kuvaparadza asi uchiona kuti mupi anogamuchira zvese zvicherwa zviripo.
LF inoita basa rakakura mukukudziridza kwemuviri wemuviri immune system. Mamwe eaya anoshandiswa lactoferrin poda anosanganisira kuwedzera kwebasa re macrophages, immunoglobulins, NK masero, uye T lymphocyte, ayo anotarisana neonatal immune. Chii chimwezve, kupa LF kunoderedza kushungurudzika kune allergener.
4. Lactoferrin Inovandudza Sei Mumuviri Muviri?
Mediates pakati peAdaptive uye Innate Immune Mabasa
Kune mhinduro yekudziya kwemukati, lactoferrin inoshanda munzira dzinoverengeka. Semuenzaniso, iyo inosimbisa zviitiko zveasipo emhondi masero (NK) uye neutrophils. Iyo protein inowedzera phagocytosis uye inokonzera kuwedzera kwemacrophages.
Yemhinduro inoshanduka, LF inobatsira mukushandurwa kweT-masero uye B-masero. Panyaya yekusagadziriswa kwekusaina, zvese zviri mukati uye zvinoshanda zvemuviri zvinoshanda zvinosangana kuti zvisanganisike.
Lactoferrin inogadzira kugadzirwa kwe-pro-immune cytokines uye interleukin 12, iyo inoratidza zvinodzivirira zvivakwa zvinopesana nehutachiona hwehutachiona hwehutachiona.
Mediates mune yeSystemic Kufuridzira Kupindura Syndrome (SIRS)
Basa re lactoferrin poda mukudzvinyirira iyo reactive oxygen marudzi (ROS) kwave kuri zvakakosha mukudzidza hukama hwayo nekuzvimba nekukura kwekenza. Kuwedzera kweROS kunoshandura kune njodzi dzakakwirisa dzekushungurudzika mamiriro nekuda kweapoptosis kana kukuvara kwenhare.
Kudzivirirwa Pakutsigira Microorganisms
Izvo zvinorwisa-hutachiona zvinokuvadza zve lactoferrin zvinotemwa pamabhakitiriya, hutachiona, hutachiona uye hutachiona hwefungus.
Microbes inobudirira uye inoenderana nesimbi kukura uye kupukunyuka. Kana ivo vakapinda murwi, LF inodzikisira yavo kushandiswa kwesimbi.
Pakati pechikamu chekutanga chehutachiona, lactoferrin (LF) inopindira kupikisa zvinokanganisa vekunze munzira mbiri chaidzo. Protein inogona kuvharira maseru receptors kana kusunga kune hutachiona, nekudaro, ichidzivirira kupinda kwayo mukati memubati. Zvimwe zvinorwisa-microbial zviito zve lactoferrin zvinosanganisira kukanganisa nzira yesero yepathogen kana kuvharira yavo carbohydrate metabolism.
Zvidzidzo zvakati wandei zvinotsigira lactoferrin powder inoshandiswa mukutungamira kweHerpes hutachiona, hutachiona hweHIV, Hepatitis C yeB uye B, furuwenza, uye hantavirus. Kunze kwezvo, iyo yekuwedzera yaitadzisa kuwanda kwealphavirus, rotavirus, human papillomavirus, nevamwe vakati wandei.
Mune zvimwe zviitiko, Lactoferrin inogona kusaburitsa hutachiona hwese asi iwe unogona kuve nechokwadi kuti ichadzora kuomarara kwehutachiona huripo. Mune zvidzidzo zvakapfuura, LF yanga ichishanda pakumisa SARS pseudovirus. Sezvo SARS-CoV-2 ichiwira mukirasi imwechete seSARS-CoV, pane mukana wekuti lactoferrin inogona kudzikisira huturu hwe COVID-19.
Kunyangwe menduru dzichibata kuti kuwedzera simba rako rekudzivirira muviri kusinga chengetedze imwe kubva ku coronavirus, lactoferrin supplementation ichabatsira muhondo. Mushure mezvose, ivo varapi vakafanana vakaona kuti vakweguru uye vanhu vanekudzivirira kwakaderera vari panjodzi huru yekubatwa neCOVID-19.
5. Lactoferrin Powder Vanoshandisa uye Kushandisa
Lactoferrin yakawanda yakawandisa poda inowanikwa yekutsvaga masayendisiti uye nyanzvi dzinoda kusimudzira kukosha kwadzo pakurapa pane muviri wemunhu. Iyo ine tarisiro yakawanda yekushandisa mukudzivirira kwechirwere, hutano hwekuwedzera, chikafu uye mishonga antiseptics, uye cosmetics.
Kune kwako kuongorora uye kuedza kwemahebhu, simbisa kuti unotora sosi kubva kune vanoshanda lactoferrin powder suppliers.
Lactoferrin poda shandisa mukati mucheche mukaka hupfu
Mucheche upfu fomula inovandudzika ichienderera mberi kuratidza iyo biochemistry yeiyo chaiyo yemukaka wemukaka kubva kuna amai. Lactoferrin ndiyo nhamba yechipiri yakanyanya kuwanda mapuroteni mumukaka waamai wemukaka. Iyo inozivikanwa nekuunza mhando dzese dzezvibatsiro kumwana kusanganisira kusunga simbi yekuzvidzivirira, kudzivirira kenza, nekusimudzira mapfupa ane hutano pakati pevamwe.
Lactoferrin inoverengeka yakawanda mumukaka waamai wekutanga unozivikanwa secolostrum. Colostrum ine zvakapetwa zvakapetwa kaviri pamamirita semukaka wemukaka wakura. Izvi zvinoreva kuti vacheche vadiki vanoda kuwanda kweiyo lactoferrin kuti ibudirire.
Kunatsiridza immune system yemucheche kunotsigirwa neLactoferrin chikamu mune zvakaumbwa zvemucheche. Iyo puroteni inoita basa rakakosha muma immune emucheche uye inomiririra yekutanga anti-hutachiona uye anti-microbial dziviriro system. Iyo yakakosha inorwisa-microbial mhedzisiro inowanzo kuunzwa nesimbi-ioni chelation, iyo yakakosha mukukura kwebhakitiriya. Kunze kwezvo, lactoferrin inofungidzirwawo kuti inoshanda se antioxidant iyo inogona kusimbisa immune immune nekugonesa kusiyanisa, kuwanda, uye mashandiro emasero ekudzivirira.
6. Lactoferrin Side Mhedzisiro
Kuchengetedza kweLF pivots pane zvishoma zvinhu.
Lactoferrin mizhinji mizinga inogona kuve chancy. Semuenzaniso, kana iyo yekuwedzera iri yakabva pamukaka wemombe, unogona kuushandisa uine chivimbo mune yakakwira mwero kwegore. Nekudaro, kana chigadzirwa chikatangira mumupunga, mikana ndeyekuti zvichiteerana kuwedzeredza kwemasvondo maviri kuchaburitsa zvimwe zvisina kunaka.
Chaicho lactotransferrin (LTF) mhedzisiro inosanganisira;
Kusiyana nemishonga yakawanda inowedzera, lactoferrin yakachengeteka kutarisira uye kuyamwisa mama.
Kupfuudza lactoferrin mhedzisiro, mutengo wepakati pe200mg kusvika 400mg unokurudzirwa. Iwe unofanirwa kuitora kwemwedzi miviri kusvika mitatu inoteedzana. Muzviitiko zvisingawanzo, iyo nguva inogona kukwira kusvika kumwedzi mitanhatu.
7. Ndiani anogona Kubatsirwa neLactoferrin?
Lactoferrin inobatsira vese amai nemucheche.
Munguva yekuenda kumwedzi, kupa ichi chinyorwa kunogona kuve nechinobatsira pahukuru hwe fetus uye huremo hwayo hwekuzvarwa. Kana amai vakaenderera ne lactoferrin dosage panguva yekuzvitakura, gadziriso yavo yemukaka wemazamu ichavandudza zvakanyanya. Kunze kwezvo, mucheche aizozvirumbidza nenzira isina kunamatira mu colostrum yekuchengetedza hutano hwemuviri.
Vacheche uye Vacheche Vacheche vasina kuyamwiswa kana Kusanganiswa
Iyo lactoferrin inowedzera inovimbisa kuti mucheche anovandudza immune system asi achidzivirira gomarara remudumbu kubva kune allergener. Kunze kwezvo, iyo yekuwedzera inoshanda senge maricho, ichibatsira mukutanga mudumbu kufamba kwemucheche. Vacheche mafomasi akapfuma mu colostrum anowanikwa kubva kune epamusha uye epamhepo Lactoferrin powder suppliers.
Kushaikwa kwesimbi Anemia
Lactoferrin inowedzera zvakanyanya inowedzera huwandu hwehemoglobin, masero matsvuku eropa, uye ferritin. Kunyangwe vanhu vazhinji vachishandisa ferrous sulfate kurwisa kushomeka kwesimbi, ongororo dzakawanda dzekutsvagisa dziri kusimbisa kuti lactoferrin ine simba.
Kana iwe uri miriwo kana unogara uchipa ropa, iwe uchazoda chikafu-chakafuma chikafu kuti uwane iyo yakaderera hemoglobin uye ferritin mazinga. Zvikasadaro, iwe unogona kugadzira yakanaka lactoferrin kutenga kubva kune vatengesi vepamhepo.
Vanhu vane Low immune
Lactoferrin inodzivirira muviri kubva kuzvipembenene nekuvhara hutachiona uye kutadzisa kuwanda kwehutachiona uye hutachiona. Iyo yakakomberedzwa inoshingairira mukushandurwa kwemasaini ekusaina nzira dzakatarisana nekutarisa mhinduro dzehutachiona dzemugamuchiri.
Lactoferrin inoshanda semurevereri, kuvharira nekurongedza mashandirapakati ari pakati pezvinhu zvinoshanda zvemuviri uye zvemuviri. Semuenzaniso, inovandudza phagocytic zviitiko nekukwira kweiyo neutrophils uye macrophages. Kune immune system inoshanda, ino inomhanyisa kukwidziridzika kweT-masero uye B-masero, anoratidza masero-ari pakati uye anonyadzisa kusadzivirira, zvichiteerana.
8. Lactoferrin ine IgG
Sezvakangoita lactoferrin, IgG kana kuti immunoglobulin G ipuroteni inodzivirira-hutachiona mumukaka memamalia.
Ongororo dzinoverengeka dziripo kutsanangura kuenderana pakati pe lactoferrin uye IgG.
Iko kusunganidzwa kwe lactoferrin mu colostrum kwakanyanya kwakanyanya kupfuura iko kweIgG. Maererano nesainzi yekutsvaga, zvinhu zvinoverengeka zvinokanganisa huwandu hwemapuroteni aya mumukaka.
Semuenzaniso, ese ari maviri lactoferrin uye IgG anoterera kupisa uye pasteurization. Immunoglobulin G inogona kutsungirira kupisa kurapa kusvika kusvika 100 ° C asi isina kana masekondi mashoma. Asi zvinopesana, lactoferrin inoderera zvishoma nezvishoma nekuwedzera kwekushisa kusvikira yanyatsopera pa100 ° C.
Kubhadhara pane aya mapepa, unofanirwa kunge wakaziva kuti nguva nekudziya kupisa ndiko kufunga kukuru kana uchigadzirisa mukaka unonatal. Sezvo mukaka pasteurization waiswa pasi pekukakavara, vanhu vazhinji vanogadzirisa kuoma-kutonhora.
The they Lactoferrin (146897-68-9) iri panguva yayo yepamusoro mushure mekubereka. Sezvo nguva yepashure inowedzera, protein iyi inoderera zvishoma nezvishoma, pamwe nekuda kwekuderera kwe colostrum. Kune rimwe divi, kudonha mumazinga e immunoglobulin G ingangoita isingagoneki munguva yose yekubereka.
Nekudaro yakawanda lactoferrin inodonha mumukaka wamamalia, kusimbisa kwayo kuchiri kwakakwira kupfuura iko kweIgG. Chokwadi ichi chinoramba chakamira nyangwe iri mu colostrum, ichichinja, kana mukaka wakura.
Yamauchi, K., et al. (2006). Bovine Lactoferrin: Zvakanakira uye Mechanism Yekuita Kurwisa Utachiona. Biochemistry uye Cell Biology.
Jeffrey, KA, et al. (2009). Lactoferrin seye Natural Natural Immune Modulator. Dzazvino Mishonga Dhizaini.
Lepanto, MS, et al. (2018). Kunyatsoita kweLactoferrin Oral Administration mune Kurapa kweAnemia uye Anemia yekuzvimba mukati mevakadzi vane Pamuviri uye Vasiri Vepamuviri: Chidzidzo chekupindirana. Mitsva mu Immunology.
Goldsmith, SJ, et al. (1982). IgA, IgG, IgM uye Lactoferrin Zviri Mukati yeMukaka wevanhu Munguva Yekutanga Lactation uye Mhedzisiro Yekugadzirisa uye Kuchengetedza. Chinyorwa chekudzivirira Kwekudya
Smith, KL, Conrad, HR, uye Porter, RM (1971). Lactoferrin uye IgG Immunoglobulins kubva kuInngenor Bovine Mammary Glands. Chinyorwa cheDairy Science.
Sanchez, L., Calvo, M., uye Brock, JH (1992). Biological Basa reLactoferrin. Archives eChirwere muUcheche.
Niaz, B., et al. (2019). Lactoferrin (LF): A Natural Anti-Microbial protein Yenhabvu Yenyika Dzese dzeChikafu Zvivakwa